Zezika ho an'ny fitoeran anana zaridaina - China Qingdao King Good New Materials
Anana dehibe raha ny amin'ny fitoeran dia hitaky bebe kokoa noho ireo zezika lehibe tao amin'ny saha. Izany satria tsy misy fomba nameno ny otrikaina izy ireo mampiasa ny rehefa maniry. Nefa aza manahy, tsy manana hividy zezika misy raitra manokana noho ny kaontenera, dia afaka mampiasa ny zezika koa ny zava-maitso zaridaina ao amin'ny fitoeran koa! Ny soso-kevitra ho an'ny miadana ambony fanafahana ho an'ny zezika organika anana dehibe raha ny amin'ny fitoeran no Healthy Grow zezika organika sy ny anana rehetra Sustane sakafo fototra ara-boajanahary.
Related Post: Ny fitoeran-javatra zaridaina hanambaka taratasy
Fa kaontenera, fa hevitra tsara ny manampy zezika organika miadana famoahana granules ho ao an-fitoeran-javatra, ary koa ny mampiasa ny rano mety levona zezika nandritra ny vanim-potoana tsy mitsaha-mitombo. Afaka manampy ny famoahana miadana zezika organika anana saha any an-tany alohan'ny fambolena ny anana, na azonao hanopy ny granules amin'ny tampon'ny ny tany sy ny rangotra, ratra kely tao an-loto rehefa fambolena
N koa hampihena fanafahana granules, dia afaka mampiasa ny rano zezika mety levona ao amin'ny fitoeran nandritra ny vanim-potoana mitombo hitandrina ny anana mitombo matanjaka. Rano mety levona zezika lehibe noho ny fanomezana ny anana haingana tosika ny zavatra mahavelona, ​​fa ampiasaina ny (na nanasa avy tao amin'ny vilany) haingana ka mila ampiharina matetika kokoa.
Related Post: 5 toro-hevitra ho an'ny lehibe kokoa mitombo peppers
Ny toerana tena tsara fanahy rano zezika ho an'ny zava-maniry mety levona zaridaina dia emulsion trondro sy ny zezika dite. Na ireo zezika organika miasa mba fitoeran-javatra lehibe zaridaina ahitra maniry mafy ny vanin-taona mafana. Fa tsy mila Fuss be loatra ny mamahana ny fitoeran-javatra maniry anana ao amin'ny fandaharam-potoana tsy tapaka, koa aza manahy raha manadino izany dingana.
Anana dehibe raha ny amin'ny fitoeran dia mila fikarakarana bebe kokoa noho ny anana sy ny zezika lehibe tao amin'ny saha. Fa mampiasa zezika ho an'ny zava-maniry sy ny kaontenera zaridaina dia mora, indrindra fa raha manomboka amin'ny manan-karena, organika tany sy mampiasa zezika voajanahary.